‘दुई वर्षभित्र उपत्यकामा भेरीको पानी ल्याउ“छौं’ – Sajha Bisaunee
‘दुई वर्षभित्र उपत्यकामा भेरीको पानी ल्याउ“छौं’
२०५७ सालमा स्थापना भएको झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय सेवा क्षेत्र विस्तार भएसँगै संस्थाको नाम समेत परिवर्तन गरिएको छ । हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा रूपान्तरण भएको यस संस्थाको १७ औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रवार (भोलि) सम्पन्न हुँदैछ । यसै अवसरमा हामीले संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटासँग उपत्यकाको खानेपानी संकट, नयाँ धारा जडान र भेरी नदीको पानी ल्याउने सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारांशः
साधारणसभाको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
साधारणसभाको तयारी पूरा भएको छ । संस्थाको वार्षिक साधारणसभा यही चैत दुई गते (शुक्रवार) आयोजना गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गरिसकेका छौं ।
साधारणसभामा के–के एजेण्डा रहनेछन् ?
यो साधारणसभामा संस्थाको वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्नेछौं । संस्थाको आन्तरिक आय र व्यय प्रस्तुत हुनेछ । त्यसमाथि पनि छलफल हुनेछ । यो वार्षिक साधारणसभा भएकाले हामीले आगामी वर्षका लागि पनि संस्थागत रणनीति र योजना तय गर्नेछौं । मुख्यगरी उपत्यकाको खानेपानी संकट समाधानका लागि छलफल हुनेछ । त्यसबाट नयाँ योजनाहरू पनि पारित हुनेछन् ।
नयाँ धारा जडानका लागि आवेदन माग्नुभयो । धाराचाहीं कहिले जडान गर्नुहुन्छ ?
हामीले खानेपानीको नयाँ स्रोत थप भएसँगै नयाँ धारा जडानका लागि आवेदन मागेका हौं । यस पटक पाँच हजार भन्दा बढी फारमहरू वितरण भएका छन् । यही चैत सात गतेसम्म धारा जडानका लागि उपभोक्ताले शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा खानेपानीको आपूर्ति अनुसार हामीले दुई हजार २३ धाराका लागि आवेदन खुल्ला गरेका थियौं । तर, आवेदन धेरै परेका छन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आउँदो असारबाट मात्रै धारा जडानको काम सुरु हुनेछ ।
आवेदन दिएका सबै उपभोक्ताले धारा पाउँछन् ?
आवेदन दिएका सबैलाई धारा दिन सक्ने अवस्था छैन् । किनभने धारा दिएर मात्रै भएन, पानीको आपूर्ति पनि सहज हुनुप¥यो । प्राविधिक हिसाबले दुई हजार धारा मात्रै दिन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण आवेदन दर्ता भएको क्रमानुसार उपभोक्ताले धारा पाउने छन् । तर, दर्ता भएका सबैले धारा पाउँछन् भन्ने छैन् । हामीले आवेदकहरूको घरमा पुगेर छानविन गर्नेछौं । पक्रिया पुगेकाले पाउनेछन् । जसले घरनै नबनाएर आवेदन दिएका छन्, उनीहरूले धारा पाउने छैनन् ।
खडेरीको मौसम शुरु हुँदैछ, खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
विगतमा जस्तो यस पटक समस्या हुनेछैन् । किनभने हामीसँग खरी र बोरी खोलाको पानी थपिएको छ । अघिल्लो वर्ष उपभोक्ताले ९६ घण्टासम्म पानीको पालो कुर्नुपरेको थियो । यस पटक त्यस्तो अवस्था आउनेछैन । समयमा वर्षात् सुरु भए पानीको संकट नहोला । तर, खडेरी नै परेमा पनि बढीमा ३६ घण्टासम्म पानीको पालो आउने छ । यसका लागि हामीले आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन गरेका छौं ।
उपत्यकाको खानेपानी संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
अहिले झुप्रा, खोर्के र इत्राम खोलाको मुहानमा पानीको स्रोत घट्दै गएको छ । यही स्रोतबाट यहाँको खानेपानी संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सम्भव छैन । अहिले नै समस्या छ । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर बनेको छ । यहाँ दिनहुँ जनसंख्या बढ्दो छ । धाराका लागि मान्छेहरू राती एक बजे नै संस्थामा आएर लाइन लाग्न थालेका छन् । यसले पनि पानीको माग अत्याधिक रहेको पुष्टी गर्दछ । वास्तवमा अब हामीले खानेपानीका लागि दीर्घकालीन स्रोतको खोजी गर्न जरुरी छ । अव यसको एक मात्रै विकल्प भनेको भेरी नदीको पानी उपत्यकामा ल्याउनु नै हो । यसका लागि हामीले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेका छौं । भेरीको पानी नल्याएसम्म उपत्यकाको खानेपानी संकट समाधान गर्न सकिदैंन ।
भेरी पानी ल्याउने योजना कहाँ पुग्यो ?
भेरीको पानी ल्याउन हामी दिनरात नभनी खटेका छौैं । अहिले यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । भेरीबाट लिफ्ट गरेर पानी उपत्यकामा ल्याइने छ । यसका लागि सरकारले समेत सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । हामीले यही आर्थिक वर्षमा भेरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजनाको टेन्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेका छौं । तत्काल यो आयोजनाको डीपीआरको तयारी हुँदैछ । अबको दुई वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउनेछौं । यसका लागि संस्था पूर्णरूपमा कसरत गरिरहेको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् ।
तोकिएकै अवधिमा भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउन सम्भव छ ?
सम्भव छ । नल्याई सुखै छैन् । यो आयोजना सफल बनाउन अव संस्थाको मात्रै दायित्व होइन । हामी यसको नेतृत्व अवश्य गर्छौ । तर, प्रदेश सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले सहयोग गरेमा काम सम्पन्न गर्न कुनै समस्या छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि लगानी गर्नु जरुरी छ । आजसम्म नगरपालिकाले खानेपानीमा लगानी नै गरेको छैन् । स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो । भेरीबाट पानी उपत्यकामा ल्याउन सम्भव छ । तोकिएकै मितिमा पानी आउँछ । यसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र उपभोक्ता जुर्मुराउन जरुरी छ ।
यहाँहरूले खानेपानी राजनीति गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ नी ?
यो विल्कुल गलत आरोप हो । संस्था बाहिर बसेर राजनीतिक रूपमा व्याख्या गरिएको भ्रम मात्रै हो । हामीले कहाँ के राजनीति ग¥यौं ? कुन विषयमा राजनीति भयो ? हामीले संस्थामा रहेर केवल उपभोक्ताको धारामा पानी खसाल्ने काममा समय बिताएका छौं । हामीले यदी राजनीति गरेका छौं भने, त्यो केवल उपभोक्ताको प्यास मेटाउने काम गरेका छौं । खानेपानीलाई राजनीतिसँग जोडिनु हँुदैन । हिजो संस्थामा नरहँदा पनि मैले खानेपानीका लागि आफूलाई समर्पित गरेको छु । अहिले पनि मेरो एउटा मात्रै सपना छ, त्यो भनेको उपत्यकामा सबैका धारामा पानी खसाल्ने हो । यसका लागि म क्रियाशील छु । कसैलाई विभेद नगरी काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । आरोपका नाममा आरोप लगाउने र आफूले काम नगर्नेहरूले मात्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
हिजो आयोजना सुरु गर्दा यो सम्भव छैन भन्थे । काम सुरु भयो, यो टिक्दैन भन्थे । अहिले आयोजना टिकाउने काम गरिरहेका छौं । तर पनि मान्छेहरू आलोचना गर्नमै व्यस्त छन् । वास्तवमा खानेपानीको आवश्यकता बढ्दो छ । यसलाई पूरा गर्न हामीले ठूलो मेहेनत गर्नुछ । हामी आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी प्रति सजग छौं । सामाजिक काम गर्नेलाई आलोचना मात्र होइन्, सकारात्मक सुझाव जरुरी छ । काम गर्नेलाई बरु उत्प्रेरणा दिने हो । तर, यहाँ अनावश्यक टिप्पणी गर्ने संस्कृति हावी भएको छ । यसले कसैको पनि भलो हुँदैन । त्यसकारण म आम उपभोक्ता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालालाई उपत्यकाको खानेपानी संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकताबद्ध भइ सहकार्य गर्नका लागि आग्रह गर्दछु ।
प्रकाशित मितिः १ चैत्र २०७४, बिहीबार १२:४०